Ndị na-emepụta akpa & ihe eji achọ mma - China's Fọọti akpa ịchọ mma
A na-eji akpa ihe eji achọ mma nke PU matte, nke dị mma imetụ aka ma nwee mmetụta nke mgbochi mmiri ma na-eyi nguzogide. Unddị gburugburu, agba dị iche iche siri ike, agba, ihe ịchọ mma kwa ụbọchị, egbugbere ọnụ, ngwaahịa nlekọta anụ na brushes ma ọ bụ obere ihe ndị ọzọ achọrọ mgbe ị na-eme njem. Ezigbo maka itinye ihe ịchọ mma na ihe nchekwa.
Ihe eji ahazi ya di iche, eji PU ihe di elu ma di nma na gburugburu ebe obibi, ihe eji acho ime nke oma na nke di nro, ekpughere nwere ikike di elu. Enwere ọtụtụ ngalaba n'ime, nke dị mma maka ịchekwa mgbaaka, olu, egbugbere ọnụ, ọla aka, nche, wdg, na-enye gị ohere idozi ma debe ihe.
Akpa akpa nchekwa ihe ịchọ mma ọhụrụ na-arụ ọrụ mkpuchi akpịrị mma nke ụlọ ahịa na-aga ahịa
Onye na-ahazi igwe anaghị arụ ọrụ, igbe nchekwa igwe eji achọ mma nke akpukpo ukwu na-eme akwa mma na gburugburu ebe nchekwa ihe dị na Oxford, bụ nke na-agbawa agba, mgba na-egbochi, mgbawa na-adị mfe. Odi nma ma obu njem, azu azu, ije, igba ezumike, ije ebe igwu miri ma obu oke osimiri, osimiri.
Akpa Nylon Dumpling Akpụkpọ Akpa Na-echekwa Ewuwu Ewu
Ego dị mma: Akpụkpọ njem njem dị mkpa bụ nke naịlọn, akwa mmiri na-adịgide adịgide, dị mfe ọcha, reusable, gburugburu ebe obibi, ndụ ogologo ọrụ, nchekwa ihe ịchọ mma, bụ ezigbo nnọchi maka akpa rọba.
Akpụkpọ akpa akpa ihe ịchọ mma njem akpa akpa ihe eji achọ mma mma
Akpa ịchọ mma nwere ike ọ bụghị naanị akpa a na-asacha, kamakwa akpa ịchọ mma, akpa nchekwa, wdg. Akpa njem na ọtụtụ ojiji. Ejiri polyester mara mma nke nwere gburugburu ebe obibi dị mma, ihe na-egosipụta mmiri, anaghị egbochi mmiri, nwere ike ichebe ihe gị, yana ịdị mfe ọcha.